Planet : Forums: Welcome Guest.
It's 01:57 PM - Myanmar time.
Join or Sign In |
Download Myanmar	Font Hi Guest
ChitChat Forums jump :
Love & Romance Music ChitChat Movies Buddhism Business Announcement Help Centre Knowledge & Education Computers Beauty & Fashion Books Games Sports Page : 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 of
62 သိုင်းလောကစိန်ခေါ်သံ maungkhantlay
Silver Member 19/12/2007 295 posts 1181.Re: ရေခဲတောင်ကြာပွင့် Mar 31, 2010 3:00 PM
phopyoecho wrote:minkhanttu wrote:phopyoecho wrote:Yegyi14 wrote:ရေခဲတောင်ကြာပွင့် စားပြီးတော့ ဒီတော့ပစ်ကို လာရောက်လည်ပတ်ပါတယ် ။
ဒယ်ဂျိုယောင်း ကိုကြောတာလေ မင်းသားလား မင်းသမီးလား ......[/QUOT
Silver Member 29/11/2006 296 posts 1182.သိုင်းလောက စိန်ခေါ်သံ Apr 19, 2010 4:11 PM
Platinum Member 14/03/2010 1617 posts 1183.Re: သိုင်းလောက စိန်ခေါ်သံ Apr 19, 2010 4:22 PM
Silver Member 29/11/2006 296 posts 1184.Re: သိုင်းလောက စိန်ခေါ်သံ Apr 19, 2010 4:38 PM
crazydonghae wrote:bobo139 wrote:ပြန်လာခဲ့ပြီ.........................
မဗြဲနဲ့ဟေ့ယောင်........အချိန် မရှိုတေးလို့ ပေါ့..
..မာဆက် ၀အောင် တွားထား.. အဲ..ယောင်လို့မန်မန်း ၀အောင် စားထား..
....သမိန် ပေါသွပ်ရဲ့ဆရာ... ဆြာဂျီးယောင်၆၀ဘိုဘို bobo139
Silver Member 29/11/2006 296 posts 1185.Re: သိုင်းလောက စိန်ခေါ်သံ Apr 19, 2010 4:43 PM
အနှီ ဆြာကြီးကား ပြန်လာခြိမ့်ချေတကား............................နွေလေရူးများတိုက်ခတ်စ အကာလညအခါ ........မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်အ၀တွင်.....မားမားမတ်မတ်ရပ်နေသူမှာ...........လှစ်ကနဲနေအောင် ...........မည်သူမျှမတွေ့မြင်လိုက်ရအောင် လျှင်မြန်လှသောခြေလှမ်းများက ..........သစ်ရွက်မြေလွင့်ကိုယ်ဖော့ပညာပေတည်း။
ဘာမပြောညာမပြောနှင့် ဆိုက်ကားပေါ်တက်ထိုင်လိုက်ပြီး.........အတွင်းအားခပ်ပါးပါးနှင့် ..........စကားသံတိုးတိုးရေရွတ်လိုက်ရာ.............................ဆိုက်ကားဆရာကျောစိမ့်သွား၏။(အင်္ကျီမ၀တ်ထားလို့)
ခြောက်ကွေ့ရောက်သော်.......ဟေ့ဆိုက်ကားဆရာရပ်တော့...............ဟုဆိုကာ မယုံကြည်နိုင်လောက်သော လျှင်မြန်ခြင်းမျိုးဖြင့်...........THE SEA ဘီယာဆိုင်ထဲပြေးဝင်သွားလေတော့၏။ ဆြာကြီး၏ပြင်းထန်လှသောအတွင်းအားကြောင့်ထင့်..........ဘီယာဆိုင်မှထွက်လာသော ...ယမကာလုလင်တစ်ချို့ခလုတ်တိုက်လဲကျန်ရစ်လေတော့၏........................
Platinum Member 14/03/2010 1617 posts 1186..... Apr 19, 2010 4:57 PM
သိုင်းလောက မှာ အထွတ်အထိပ် တုနှိုင်းစရာမရှိတဲ့ မင်းသမီးလာပြီနော်..ရှောင်ကြ ရှားကြ minkhanttu
Platinum Member 04/11/2007 1633 posts 1187.Re: .... Apr 19, 2010 7:58 PM
သိုင်းလောက မှာ အထွတ်အထိပ် တုနှိုင်းစရာမရှိတဲ့ မင်းသမီးလာပြီနော်..ရှောင်ကြ ရှားကြ
မင်းသမီး လေး ရေ ဆေးတော်လေး သောက်လဲ့ပါဦး bobo139
Silver Member 29/11/2006 296 posts 1188.Re: သိုင်းလောက စိန်ခေါ်သံ Oct 12, 2010 6:15 PM
bobo139 wrote:crazydonghae wrote:bobo139 wrote:ပြန်လာခဲ့ပြီ.........................
(ဆက်ရန်) "so silent here" he told and then return to N.Y city......Heeeee nilar14189
Planet Strong Member 29/04/2009 3491 posts 1189.ဘာတွေဖစ်ကုန်ပီလဲ Oct 17, 2010 4:12 PM
Platinum Member 15/09/2008 1929 posts 1190.Re: ဘာတွေဖစ်ကုန်ပီလဲ Oct 17, 2010 7:25 PM
Planet Strong Member 29/04/2009 3491 posts 1191.Re: ဘာတွေဖစ်ကုန်ပီလဲ Oct 17, 2010 7:38 PM
wintye wrote:nilar14189 wrote:သိုင်းလောကမှာဘာတွေဖစ်ကုန်ပီလဲ
အမ် ဝတ်ရည်ရယ် လုပ်ရက်လိုက်တာနော် ဘယ်ပျောက်နေလဲ တွေ့ဘူးနော်
Platinum Member 15/09/2008 1929 posts 1192.Re: ဘာတွေဖစ်ကုန်ပီလဲ Oct 17, 2010 7:54 PM
nilar14189 wrote:wintye wrote:nilar14189 wrote:သိုင်းလောကမှာဘာတွေဖစ်ကုန်ပီလဲ
အမ် ဝင့်ရည်ရယ် လုပ်ရက်လိုက်တာနော် ဘယ်ပျောက်နေလဲ တွေ့ဘူးနော်
အသိအကျွမ်းဟောင်းဆိုပြီး မျက်ကွယ်ပြုထားမယ် ထင်သလား?
Platinum Member 15/09/2008 1929 posts 1193.Re: ဘာတွေဖစ်ကုန်ပီလဲ Oct 17, 2010 8:00 PM
ညီမလေး account ပြောင်းထားတယ် မရဲ့.. nilar14189
Planet Strong Member 29/04/2009 3491 posts 1194.Re: ဘာတွေဖစ်ကုန်ပီလဲ Oct 17, 2010 8:02 PM
wintye wrote:nilar14189 wrote:wintye wrote:nilar14189 wrote:သိုင်းလောကမှာဘာတွေဖစ်ကုန်ပီလဲ
အဟင့် ဟင့် ခေးကို အနိုင်ကျင့်နေတယ် တိုင်ပြောမယ် အဟင့်ဟင့် nilar14189
Planet Strong Member 29/04/2009 3491 posts 1195.Re: ဘာတွေဖစ်ကုန်ပီလဲ Oct 17, 2010 8:03 PM
အဟင့် ဟင့် ခေးကို အနိုင်ကျင့်နေတယ် တိုင်ပြောမယ် အဟင့်ဟင့် wintye
Platinum Member 15/09/2008 1929 posts 1196.Re: ဘာတွေဖစ်ကုန်ပီလဲ Oct 17, 2010 8:23 PM
အဟင့် ဟင့် ခေးကို အနိုင်ကျင့်နေတယ် တိုင်ပြောမယ် အဟင့်ဟင့်
Planet Strong Member 29/04/2009 3491 posts 1197.Re: ဘာတွေဖစ်ကုန်ပီလဲ Oct 17, 2010 8:27 PM
wintye wrote:nilar14189 wrote:
ကော်နက်ရှင်ကြောင့်ပါကွယ် နာတင်တာတော့ တီခါထဲ
Platinum Member 15/09/2008 1929 posts 1198.Re: ဘာတွေဖစ်ကုန်ပီလဲ Oct 17, 2010 9:16 PM
ဟိုလူ သည်လူ လက်ညှိုးထိုးမနေနဲ့....
အဲ့လို အပြစ်ပုံချလိုက်ရုံနဲ့ လွှတ်ပေးမယ် ထင်သလား????
Silver Member 19/12/2007 295 posts 1199.Re: သိုင်းလောက စိန်ခေါ်သံ Nov 11, 2010 11:42 AM
Planet Strong Member 30/07/2007 4007 posts 1200.Re: .... Nov 11, 2010 9:08 PM
ရှောင်မနေဘူး ရည်းစားစာ လိုက်ပေးမှာ..
နာဇီ 1 ... 56 57 58 59 60 Messages Results 1181 - 1200 of about 1239 for seconds milliseconds. (2.917 seconds)
Love & Romance Music ChitChat Movies Buddhism Business Announcement Help Centre Knowledge & Education Computers Beauty & Fashion Books Games Sports Planet Myanmar Forums. All rights reserved.
o News o Musicportal
o Horoscopes o pCards
o Aspiring Artists
o Beauty & Fashion
o Post N' Share
o Book Corner
o International Stars
o Advertising Info
Powered by Inforithm-Maze.
Planet Myanmar Network. All rights reserved.